"शेयर बजारमा अनुभव हुनेले पैसा कमाउने हो,पैसा मात्र हुनेले अनुभव कमाउने हो"; कमल तिवारी - Lagani News
Home Interview "शेयर बजारमा अनुभव हुनेले पैसा कमाउने हो,पैसा मात्र हुनेले अनुभव कमाउने हो"; कमल तिवारी
"शेयर बजारमा अनुभव हुनेले पैसा कमाउने हो,पैसा मात्र हुनेले अनुभव कमाउने हो"; कमल तिवारी
Published: Saturday, October 13, 2018 2018-10-13T23:08:00-07:00
Santosh Raj Bajgain October 13, 2018 Interview,
बुटवलमा ब्रोकर सेवा नै उपलब्ध नभएको बेला संस्थागत हिसाबमा सफल नेपाल इन्भेस्टमेन्टले शेयरमा लगानी सुरु गर्‍यो। बुटवलबाट चितवनसम्म आएर शेयर कारोबार गर्दै आएको सफल नेपाल इन्भेस्टमेन्टले ब्रोकर आउनु अघि नै त्यस क्षेत्रमा शेयर बजारको माहोल बनाउने काम गर्दै आएको थियो। सोही इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको अध्यक्ष कमल तिवारीसँग लगानीन्युजले गरेको कुराकानी :
सर्वप्रथम तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ !
बुटवलमा ब्रोकर सेवा उपलब्ध नहुँदै तपाईहरुले संस्थागत लगानीको अवधारणा ल्याउनु भयो , कसरी आयो यो विचार ?
हामीले ४ वर्ष अघि सफल ग्रुप भनेर एउटा साथी भाइको समूह बनाएको अवस्था थियो। बुटवलमा शेयर कारोवार सहज नभएको र काठमान्डौ बस्दा सबै साथीभाईलाई शेयरको ज्ञान भएकाले हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मार्फत लगानी गर्ने विचार आयो। निकै लामो छलफल पछि हामी काठमान्डौ गएर कम्पनी दर्ता गरेका थियौ। शेयर बजार लगानीको राम्रो क्षेत्र हो, यहाँ थोरै पुँजीले पनि लगानी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले ब्रोकर आउनु अघि नै हामीले बुटवलमा शेयर बजारको एउटा माहोल बनाएको अवस्था थियो।
ब्रोकर आउनु अघि नै शेयर कारोबार गर्न दुख त भयो होला नि ?
पक्कै पनि हामीले निकै दुख पाएको अवस्था थियो। बुटवलबाट हामीले शेयर कारोबार गर्न चितवन जानु पर्ने बाध्यता थियो । नारायणघाट स्थित हामी त्रिशुल सेकुरिटिज बाट शेयर कारोबार गर्थ्योउ। समयमा डिआईएस नपुग्दा हामीले धेरै तनाव भोग्नु परेको थियो। फेरी बुटवलमा शेयरको त्यस्तो माहोल नबन्दा हामीलाई नयाँ प्रमोटर साथी भाइलाई शेयर घटेको बेला सम्झाउन नि निकै गारो भयो। कतिले शेयरलाई जुवा घर पनि भन्थे। सुरु सुरुमा निकै अप्ठेरो भयो।
उहिलेको र अहिलेको बुटवलको बजारमा फरक के ?
मैले अघि नि भनेको थिए, शेयर कारोबार गर्न सारै अप्ठेरो थियो। समयमा डिआइएस नपुग्दा हामी केही पटक पेनाल्टीमा पनि परेको अवस्था थियो।
अहिले हेर्ने हो भने बुटवलमा ५ वटा ब्रोकरको शाखा (RWS) छन्। पहिले त्यति दुख गरेर कारोवार गरिन्थ्यो अहिले एकै पटक ५ वटा ब्रोकरको शाखा आउँदा मेरै घर भित्र ब्रोकर आएको जस्तो लाग्छ।
अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको लागि राजधानी भन्दा यहाँ सजिलो छ । ५ वटा ब्रोकर र थोरै लगानीकर्ताको सङ्ख्याले गर्दा यहाँका लगानीकर्ताहरुले राम्रो सेवा सुविधा पाउनु भएको छ। ब्रोकरको आगमन सँगै यहाँ प्राथमिक बजारको माहोल पनि राम्रै बन्यो। सी-अस्वाले गर्दा झन् प्राथमिक बजारको माहोल राम्रो छ। चिया पसलमा गफ हुँदा शेयरको गफ हुन थालेको अवस्था पनि सुरु भएको छ।
शेयर बजारमा अनुभव भएको मान्छेको भेट पैसा भएको मान्छे सँग हुन्छ र केही समय पछि अनुभव भएको मान्छे सँग पैसा हुन्छ र पैसा भएको मान्छे सँग अनुभव। त्यसैले दोस्रो बजारमा अनुभव लिन ठुलो पैसा खर्च नगर्नुस्।
बुटवलमा ब्रोकरको शाखा आउँदा बजार निकै माथि थियो। त्यसपछि निरन्तर घट्न थाल्यो , बुटवलमा त्यो समय प्रवेश गर्ने धेरै लगानीकर्ताले पैसा गुमाए भन्न सकिन्छ ?
हो यो कुरा सही हो। शेयर बजारमा अनुभव भएका मान्छेको भेट पैसा भएको मान्छे सँग हुन्छ। त्यो बेला यहाँका लगानीकर्ता सँग पैसो त भयो तर अनुभव भएन र अहिले हामीले अनुभव प्राप्त गरेको अवस्था छ ।
त्यो बेला भर्खर शेयर कारोबार सुरु भएको त्यही भएर धेरै लगानीकर्ताले 'इमोशनमा' पैसा लगानी गर्नु भयो । बजार बढ्दा पनि हामीहरूले शेयर बेचेनौ। शेयर किनेपछि बेच्न सक्नु पर्छ भन्ने अनुभव बजारले हामीलाई सिकायो । तर विस्तारै अनुभव भएको लगानीकर्ताको संख्या बढ्दो छ। अहिले घट्दो ट्रेण्डमा समेत लगानीकर्ताले छोटो समय कारोवार गरेर पैसा बनाएको अवस्थापनि छ।
उपत्यका बाहिर हाईड्रोपावरको प्रोमोटर शेयर भन्दै धेरै लगानीकर्ताबाट पैसा उठाइएको पाइन्छ, केही लगानीकर्तालाई मैले लगानी गरेको हाईड्रो कुन खोलामा बन्दै छ भन्ने पनि थाहा छैन, के भन्नु हुन्छ ?
यो क्षेत्रमा मात्र नभएर धेरै पहाडी भेगमा चलेको कुरा हो। हाइड्रोमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आउनु हुन्छ। आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ , प्रति मेगावाट लागत जस्ता कुराहरू त्यति स्पष्ट हुँदैन। अहिले लगानी गर्नु भयो भने प्रत्येक वर्ष ८-१० प्रतिशत व्याज मर्दैन र पछि दोस्रो बजारमा राम्रै दाममा बेच्न पाउनु हुन्छ भनेर सुनौलो सपना देखाइन्छ। सपना र यथार्थ निकै फरक छ। त्यही भएर हाइड्रोको प्रमोटर शेयरमा लगानी गर्नु पूर्व निकै नै सजग हुन जरुरी छ। धेरै कुरा बुझेर मात्र लगानी गर्नु पर्छ ।
सर्वप्रथम म नियामक निकायलाई ब्रोकर (RWS) दिँदा बजार फुलेको बेला नदिनु हुन् आग्रह गर्दछु , किनकि नयाँ ठाउँको लगानीकर्ता सँग अनुभव हुँदैन। बजार विस्तार गर्ने भनेको बजार घटेको बेला हो।
तपाईहरू शेयर तालिममा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ, आखिर किन ?
शेयर भनेको जुवा घर होइन। शेयर बजारमा शिक्षा र अनुभवले कमाउने हो । त्यसैले यो क्षेत्रमा शेयर शिक्षा चाहिन्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा शेयर तालिम आयोजना गर्दै आएको छौ।
हामीले १ वर्ष अघि बुटवलमा क्यापिटल प्लससंगको सहकार्यमा करिब १८० जना लगानीकर्तालाई राखेर शेयर तालिम आयोजना गरेको थियौ। त्यसपछि बुटवलमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, तिलोत्तमामा एउटा र भर्खर पाल्पाको तानसेनमा एउटा कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न भयो ।
हामी निरन्तर शेयर शिक्षा अभियान मा छौ। अब हामी कपिलवस्तुमा शेयर तालिम आयोजना गर्दै छौ। हामी प्रदेश नम्बर ५का सबै जिल्लामा शेयर शिक्षा अभियानमा लागेका छौ । नियामक निकायलाई हामीले सहयोग गरेका छौ।
त्यस्तै लगानीकर्तालाईपनि के भन्न चाहन्छु भने सुरुमा प्राथमिक बजारबाट शेयर खरिद गर्दै गर्नुस् अनि केही थोरै रकम लिएर मात्र दोस्रो बजार प्रवेश गर्नुस्। जब त्यो थोरै पैसा बाट अनुभव लिनु हुन्छ अनि मात्र ठुलो पैसा दोस्रो बजारमा लगानी गर्नुस्। किनकि मैले अघि नै भने शेयर बजारमा अनुभव भएको मान्छेको भेट पैसा भएको मान्छे सँग हुन्छ र केही समय पछि अनुभव भएको मान्छे सँग पैसा हुन्छ र पैसा भएको मान्छे सँग अनुभव। त्यसैले दोस्रो बजारमा अनुभव लिन ठुलो पैसा खर्च नगर्नुस्।
By Santosh Raj Bajgain - October 13, 2018